चित्र Archives - Balsirjana
प्रसिद्धि रेग्मीकाे चित्र
बालसिर्जना संवाददाता २० भदौ २०७७, शनिवार
आयुषा तिमिल्सिना, प्रेरणा मावि, भरतपुर १२, चितवनका चित्रहरु बालसिर्जना मासिकमा
Aayusha Timilsina १६ भदौ २०७७, मंगलवार
1234567बाँकी
Art by Trishna Bhandari
Trishna Bhandari १६ भदौ २०७७, मंगलवार
Picture by Aayusha Timalsena
बालसिर्जना संवाददाता ११ भदौ २०७७, बिहीवार
ईश्वर बस्नेत १ असोज २०७६, बुधवार
बसन्तको बेलामा वनमा रमाउने चरी । मिठो गीत गाई मुग्ध बनाउछिन् कोइली ।। कुहु कुहु गरी कराई संकेत दिन्छिन् । काफल पाक्यो भने उडेर जान्छिन् ।। जङ्गलको बीचबाट सुनाउँछिन् समाचार । फैलाउँदै आफ्ना राम्रा–राम्रा विचार ।। सुन्न मन लाग्छ उसको मधुर स्वर । घाँसमा भई लम्पसार ।। वनमा...बाँकी
आमा तिम्रो सरल मुटुको स्नेह छोडेर आएँ साहूजीको ऋण तिरिदिने लक्ष्य राखेर आएँ घोच्दै होला कटु बचनले साहुले नित्य आमा नार्यो होला हल पनि कठै! साग छर्ने गरामा ।।१।। रोई रोई मलिन विचरी नित्य तिम्री बुहारी भन्दै होली अब त पतिले ल्याउला भारी तारी पापा नाना भनिकन सदा...बाँकी
BalsirjanapoemPurnaChandra Ghimireस्व.पूर्णचन्द्र घिमिरे
स्टेस्थेस्कोप एउटा चिकित्सकीय यन्त्र हो । यसको आविष्कार सन् १८१६ मा फ्रान्सका आर.टी.ए. लैनिक नामक वैज्ञानिकले गरेका हुन् । यो यन्त्र चिकित्सकले घाँटीमा बेरेर हिँडिरहेका हुन्छन् । स्टेथेस्कोपको मद्दतबाट चिकित्सकले बिरामीको मुटुको धड्कन, श्वासनली तथा फोक्सोमा हुने श्वासप्रश्वास प्रक्रिया र पेटभित्रका पाचनक्रियाको अवस्था थाहा पाउने गर्छन् । स्टेस्थेस्कोपको...बाँकी
माछाले कसरी सास फेर्छ ?
मानिस वा अन्य स्तनधारी जन्तुको फोक्सोबाट श्वासप्रश्वास प्रणाली सञ्चालित हुन्छ तर माछा फोक्सो हुँदैन । त्यसैले माछाको सास फेर्ने प्रक्रिया फरक हुन्छ । श्वासप्रश्वासका लागि माछाको टाउकोको अलि तल ढकनले छोपिएको अवस्थामा गिल्स नामको विशेष अङ्ग हुन्छ । त्यो अङ्ग प्वालभित्र हुन्छ । यो भित्रबाट मुखसँग जोडिएको हुन्छ...बाँकी